Home Wararka Xaggee ka keenay magaca cusub ee Fahad Yasin lagu doortay?
[XOG] Xaggee ka keenay magaca cusub ee Fahad Yasin lagu doortay?
La-taliyaha amniga madaxweyne Farmaajo, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo shalay tagay magaalada Beledweyne ayaa shahaadada musharaxnimo ku qaatay magac cusub, kaasi oo maanta lagu doortay.
Magacan ayaa ah mid ka mid ah magacyada uu Baasaboorka uga qaatay Kenya taasoo bartamihii 2019 aay Dowladda Kenya ka ceshatay dhalashada dalkeeda oo uu ku qaatay sifo sharci darro ah.
Qormo dheer ayeey MOL ka qortay Bishii Ogoosto 18, 2018 (Halkan ka akhriso) taasoo keentay in Dowladda Kenya aay tallaabo sharci ah ka qaado Baasaboorada uu Fahad ka qaatay dalka Kenya.
Haddaba, sida aad la socotaan waxaa uu Fahad ka qabsaday qareeno dalka Kenya halkaasoo aay dowladda Kenya ka xayirtay malaayiin Doollar oo ugu jirtay laba koonto bangi uu ku lahaa dalka Kenya, haddaba si uu u sii wado dacwada Fahad ma bedeli karo mana qaadan karo magaciisa saxda ah waana midda keentay in uu xildhibaan ku noqdo magaca Fahad Dahir Axmed oo ah mid been abuur ah.
La-taliyaha amniga madaxweyne Farmaajo iyo xulafadiisa ayaa dadaal xoogan geliyay sidii uu kursigaas usoo qaadan lahaa, wuxuuna qorshaha kursigaan qeyb ka yahay xasaanad u helista xubno ka tirsan/tirsanaa NISA.
Previous articleGuddiga Doorashooyinka DF oo shaaciyay In lagala wareegay Baraha Bulshada
Next articleWaa maxay wajiga 4aad ee qorshaha Fahad, Guudlaawe & Dabageed ee xildhibaanada Xawaadle iyo Gaaljecel?